Affinity Publisher Tonga ao amin'ny Windows sy Mac amin'ny endrika Beta ho an'ny daholobe | Famoronana an-tserasera
Affinity Publisher dia misy ho an'ireo miankina amin'ny InDesign Avy amin'ny Adobe, tena mieritreritra ianao raha mendrika ny mandoa ny saram-bola andoavanao isam-bolana mba hankafizanao ny endriny.
Ary miatrika a InDesign tena mpifaninana ary fampiharana iray hafa izay lasa fomba tsara indrindra hanana programa matihanina isan'andro. Azo antoka fa misy mpamorona sasantsasany izay mila ny endri-javatra rehetra amin'ny InDesign, fa ny Publisher dia toa tsara amin'ny kinova voalohany.
Tsy ny Publisher ihany no resahinay, fa Affinity dia misy sary y Designer toy ny hafa fandaharana roa avo lenta hisolo ny Photoshop sy Adobe Illustrator. Fandaharana roa tsy manam-paharoa misy amin'ny fandoavam-bola tokana 54,99 euro raha misy ny Affinity Photo.
Ianao dia mila a kely kokoa noho ny 1GB ny toerana fitahirizana ary ny beta maimaim-poana an'ny Affinity Publisher dia misy ho an'ny Mac sy Windows. Tokony holazaina ihany koa fa miatrika ny kinova voalohany isika, noho izany, raha ny fahitana azy dia afaka mahita bibikely izay tsy maintsy hotaterintsika izy ireo hahafahan'izy ireo mametraka azy io ary miomana azy handefa azy ireo.
Nandamina ihany koa ny fiarahana andiana fampianarana avy amin'ny tranokalanao hiditra Mekanisma sy fizotran'asa an'ny mpanonta. Amin'izany fomba izany no ahafahantsika mizatra haingana amin'ny fanaovana ny asa isan-karazany amin'ny alàlan'ny programa izay ho lasa tena alternativa amin'ny InDesign.
Lahatsary toa ny manampy lahatsoratra tsotra, ny fitadiavana sary, mampifandray sary, fomba soratra, sary mifandraika, fonosana an-tsoratra sy ny maro hafa izay mamporisika anao ho hitanao mba hahatonga anao ho mailaka amin'ny Publisher. Lahatsary fohy izy ireo, noho izany ao anatin'ny minitra vitsy dia ho vonona hanararaotra tanteraka ity programa mahafinaritra ity ianao.
Fifaliana lehibe ho an'ny mpamorona marobe ny fahatongavan'ny Affinity Publisher, izany dia afaka mampihena ny vidiny avy amin'ireo programa mamela ny fidirana amin'ny endriny rehetra ho an'ny fandoavam-bola tokana.
Azonao atao ny misintona ny beta ampahibemaso avy eto.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » Azo Beta maimaimpoana ho an'ny mpampanonta Affinity ankehitriny: Alternative tena izy amin'ny InDesign